Waanta lubbuu qabuuf lubbuu hinqabne ,cufti mootii qaba – Welcome to bilisummaa
Waanta lubbuu qabuuf lubbuu hinqabne ,cufti mootii qaba
Ani ijaarumsa haqaa akka barbaadu irra deebii’ee qamaa nama dhunfaas gaafacha ture garuu deebii isaan waan nama qufsu miti haa ta’u namni tokko ijjannoo siyaasaaf gumaacha godhus nagaafte achii booda haala dhalachu ADO/ODF irra ka’ee nati usee
Yaada kanaas ergeef deebii dhabee
Mootiin Dachee Enyuu ?
Milkofte Jirta baay’isee nama yaachisa garuu haalli keessa dabrte Obbooleessa kiyya anis seena akka kana qaba yoo karaa jirate anaafs ijaarama qabsoo haqaa waan barbaaduuf deebii naaf kenni .hibboo130@yahoo.co irrati
Yaadni armaan gadii kan armaan duraa namaaf barreese deebii irra dhabee ilaali mee
Waanta lubbuu qabuuf lubbuu hinqabne ,cufti mootii qaba.Waant lubbuu dhabeeyi itti makameef dhagaan matasaa mootii qaba.
Oromoon yoo korma jalaa ajeesan ,gaafa guma gaafatu akkas jedha,”Kumaa gara qaba,kumaa lafa qaba ,daangaahinqabu,ambaa(lammii),diinaa dhalchaa itti naa jedhi” jedhan.Kun daandiif seera kaleesa kormi qabuuf gatii isaa ifaati gaafachuuf guma argachuu.Gaaffii kana an waa malee hin kafnee(gaafane).Mootii ofii beekuun barbaachisa.Oromoon waani dubaati hambisee inni tokko mootii ofii wallaalu irra kan ka’eef mootii isaatu diinaaf dabarsee yeroon itti kenna ture nijira wali-kennu Oromoo biraati OPDO waan baraatameef ittu jiran ammas
Mamaaksa tokko haa jennu mee.
Waa Sad nati hima 1).Imaaltun bate hanga amma hingaliin enyuu?
2).Ibidda bobahee(gubate) hanga amma ykn har’aa hin dhamne enyuu?
3).Haababoo(daraara) daraare hanga amma hin qaamoofne enyuu?
Deebii isiin irra egaa???
Mootiin dachee enyuu isaa jedhuuf deebiin karaa(Xuure) dha.Addunyaa tana irratti sabni kamuu karaa waan tokko galman gahun karaa qaba.Oromoons akkasumma.
Ummani Oromoos abdiin (karaan) isaa ABO akka ta’e ifa galadha.Ifatti an kan isiin gaafadhu ,Namni Oromoo ta’e kamuu maqaa dhaabaa kanan rakkoo irratti kufaa,kufnees, dhaabni waan hubaatuuf ,maliif sabaa ofiiti siiqe akka Oromoon marti kan isaa ta’e waan beekamuuf ,Oromoo kamiiyyuu hin dhiisan waan ta’eef maliif nuti kan ofii keenya beeknu legal member maliif ta’amee hojja hin hojjanne??
Karaa ta’u irra darbe, ABOn akka dhaabaa siyaasaa ganamaatti mallattoo eenyummati.ABOn Hundee Oromummaati.Raajiin ABO cufti barraahuu hindaanda’u,Safaramees hindhumu!!.
Kanaaf miseensa ABO ta’un nu barbaachisu? Rakkanee jira abdii nuf kenna.
Previous Bilisummaa Bilisummaa Bilisummaa
Next Sagaleen teenya haa dhagayamtuu